Kodzero-dzevanhu, 08 Kubvumbi 2019
Muvhuro 8 Kubvumbi 2019
Kubvumbi 08, 2019
Chimanimani Hotel Ichiri Kubatsira Vakawirwa neDambudziko reCyclone Idai
Hotera iyi inozivikanwa zvikuru nekubatsira kwayakaita mukuchengeta vanhu vanodarika mazana mashanu pakaitika mafashamu aya pakati pemwedzi wapera, kuburikitsa nekupa vanhu ava pekugara pamwe nechikafu.
Vashandi muBazi rezveHutano Vakawirwa neDambudziko reDutumupengo Vonyimwa Rubatsiro
Vashandi vanoona nezvehutano kumatunhu eChipinge neChimanimani vanonzi vari kusarurwa panyaya yerubatsiro rwuri kupiwa vanhu vakapona patsaona yedutumupengo kana kuti cyclone Idai, iyo yakaurauya vanhu nekuparadza misha yavo.
VaSikhala Vorambidzwa Kumirira Dzimwe Nhengo Dziri Kupomerwa Mhosva yeHuori Pamwe naVaMliswa
Magweta enhengo ina dzeparamende idzi anotiwo haana kufara kuti komiti yeparamende iyi haina kuvapa magwaro ese anoita kuti vakwanise kumirira nhengo idzi.
Zanu-PF Yotumira VaMatemadanda Kuti Vakwezve Amai Mujuru Kuti Vadzoke kuZanu-PF
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru varamba mashoko ari mubepanhau reSunday Mail ekuti vari kuda kudzokera kubato reZanu-PF kunyangwe vati havo bato iri rakambotumira nhumwa kuzovakumbira kuti vadzoke.
Vatori veNhau Voratidzira muHarare Vachiti Havasi Kufara neKushungurudzwa neMapurisa
Vatori venhau nhasi varatidzira muguta reHarare vachitsutsumwa nenyaya yekurohwa nekukanganiswa kana vachiita basa ravo nemapurisa eZimbabwe Republic Police pamwechete neekanzuru.
Mushandi weHurumende Anomiswa Pamberi peDare neKuba Rubatsiro rweCyclone Idai
Amai Chideme vari kupomerwa mhosva yekuba rubatsiro rwakasiyanasiyana rwunokosha zviuru zvitatu zvemadhora rwaifanirwa kuenda kuvanhu vakavhiringidzwa nedutumupengo Cyclone Idai.
Kubvumbi 07, 2019
Zimbabwe Inobata neRwanda muKurangarira Kurwisana kweMarudzi Muna 1994
Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzidza kubva kuRwanda kuitira kuti igadzirisewo nyaya yekupondwa kwevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands munguva yeGukurahundi.
Kubvumbi 06, 2019
Nyika yeRwanda Yopembedzwa neKusaviga Chokwadi Pamusoro peKupondana kweMarudzi
Mutungamiri weRwanda, VaPaul Kagame, vanotendwa zvikuru nekukwanisa kwavo kuunza runyararo munyika yakanga yaparadzwa nekurwisana uku, runyararo urwo rwakaita kuti marudzi airwisana aya agarisane zvakare murunyararo.
Econet Group Yobatsira Vakarasikirwa neMabhizimusi Avo muCyclone Idai kuManicaland
Mushandi mukuru weEconet Group, VaLovemore Nyatsine, vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvakawanda zviri kuitwa nekambani yavo mudunhu iri.
Kubvumbi 05, 2019
America Yovimbisa Kuramba Ichibatsira Vakavhiringwa neCyclone Idai
Hurumende yeAmerica inoti dutumupengo reCyclone Idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi nekudaro icharamba ichiona kuti vanhu veko vawana rubatsiro.
Apo Rwanda iri kuCherechedza Kupondana kweMarudzi, Mumiriri Wayo muZimbabwe, Anokurudzira Kubatana
Apo Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondwa kwemarudzi muna 1994, mumiriri wenyika iyi muZimbabwe, VaJames Musoni, vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe vabatane nekushanda pamwe kuitira kuti nyika ive nerunyararo nebudiriro.
MDC North America Yatanga Kongiresi Yayo KuOhio
Bato reMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa riri kutanga nhasi manheru kuita kongiresi yemudunhu reNorth America muguta reColumbus ku Ohio.